Qoraalka uu Somalitalk u soo diray Cabdirizaq Atosh
Bashir Jama | bashyon@yahoo.se
Waad salaamantihiin dhammaan bahda somalitalk, In la idin ka raali galiyo ayaa banaanaatay aqoondarrada uu ku hadlay ninka difaacayey BBCiida.
Runtii wax ka soo qaad ma leh waka uu ku hadlay Cabdirizak Atosh. (He is acting on impulse rather than solid ground of reflection and moral principles).
Wax damiir ah oo haba yaraatee ka muuqdaa ma jiraan nikaas, wariyaha lagu sheego, waxa uu qoray. Nin baahan oo meherad� ka raadinaya BBCida ayuu u egyahay. Waxa uu nasiiyey matal aad u qurxoon oo ka tarjumaya sida dadka qaarkiis ay ula boodaan dereenkooda qayaxan iyo halka laabtoodu jeceshahay iyaga oo aan inna tixgalineyn aragtida macquulka ah oo laga qaadan karo mawduuca laga doodayo. Arrin ku koobnaan kartey dood furan ayuu ula booday qabyaalad iyo meel aan laga hadlayn
BBCiidu yaan eedda la wada saarin, waayo ninka ingriiska ah ee madaxda ka ah BBC oo dhan, afka uma galin Xassan Bariise iyo Axmed Kismaayo waxa ay soo diraan. Dhacdooyinka ayay qaarna ka dhigaan war weyn qaarna ay iloobaan. Waxaasi waa skooladii qadiimka ahaa ee Distortionka ku dhisnaa:� Meeshaan xeerhoosaad in uu jiro aan caddaanku la ogayn ayaa ka muuqata.
Waxaa cad in ay jirto: omit any news you dont like. Dhacdo yar oo dan u ah muraadka siyaasadeed ee aad leedahayna balballaari oo ka bixi faallooyin. Intaas weeye meesha waxa yaal. Siyaasadda runta ah ee reer galbeedku ma aha sida laantu u shaqayso, laakiin dadka qaarkiis ayaa ka caraysan sida loo buunbuuniyo gafka yar oo ay geystaan wanaagga ay ku kacaanna aan loo sheegin. Taasi waa wax ku kooban tafaftiraha iyo ninka warka soo tabiyey waa arrin iyaga u gaar ah oo gaaladana lagu sirayo oo ay mar walba ku khaldayaan maskaxda caddaanka oo ay ku adagtahay in ay aad u fahman fikirka laqdamadeed ee soomaalida.
"qof caadifiyaddu ka caraysiin karto ma qaadi karaa masu''uliyad u baahan xaqiiqo raadin iyo in loo falanqeeyo arrin kastaaba sida ay tahay" Bashiir Jaamac.
Haddii aad ka dacwooto BBCiida warkaagu meel fog ma gaarayo waayo adduunka oo dhan baa waligeed ka dacwoonayey Ruush iyo shiino ayaa wax ka guri waayey. waddamadaas waan ka duwannahay, waayo waxa na jaah wareerinaya ma aha BBC ee waa turjubaanada nin ba qoladiisa shiddada ka weecinayo.
Maxaa hadda dhici kara ayaad filaysaan haddii Catoosh noqdo tafaftire ama kan ka soo warramaya goob muhiim ah. Sow haddeer ma caddeyn in uusan noqon karin qof waaqici ah oo arrinkasta sida ay tahay uga warramaya. qof caadifiyaddu ka caraysiin karto ma qaadi karaa masu''uliyad u baahan xaqiiqo raadin iyo in loo falanqeeyo arrin kastaaba sida ay tahay.
dadka ka soo qabtay mas'uuliyad shirkadaha reer galbeedka ayaa fahmi kara habka uu ku shaqaysto Yuusuf.
waad mahadsantihiin dadka lunsanna allaha soo hadeeyo.